Isitudiyo soQoqosho sokuhlala esinendawo yabucala
Uninzi lwabucala, ngexabiso elincinci. Le studio ephilayo inika oko kanye. Ifakwe ibhedi epholileyo kabini, idesika kunye nendawo yokuhlala / yokutyela. Igumbi lococeko linendlu yeshawari kunye nekhitshi elikwasebenza njengesitya sakho sokuhlambela. Unokuzilungiselela (ezilula) izidlo kwaye uzikhathalele. Ngaphandle kukho ithafa apho kuvunyelwa ukutshaya. Esi sithuba silungele abo bangayifuniyo imfuneko yehotele yodidi, kodwa abanokonwabela ukulula.
Isitudiyo sikumgangatho osezantsi wendlu enkulu yosapho enemigangatho emithathu. Mna (okanye ezinye iindwendwe) ndihlala kwigumbi eliphezulu, ngoko asiyi kuqaphela ubukho bomnye nomnye. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba umntu afune ukusebenzisa umatshini wokuhlamba impahla okanye angene egadini. Emva koko kuya kufuneka kufakwe indawo yokucoca igumbi le studio. Kodwa unokutshixa kwaye wenze mnyama le ndawo (ukusuka ngaphakathi), ngoko ke ubumfihlo ekupheleni kwakho buhlala buqinisekisiwe.
I-Brunssummerheide inomtsalane wokwenyani kwaye unokuhamba apho usuka endlwini yam kwimizuzu emihlanu. Ngaphaya koko, iindawo ezinje ngeVaals, iValkenburg, iMaastricht kodwa kunye neJamani iAachen entle zonke zikumgama wesiqingatha seyure xa uhamba. Ke ngoko sisiseko esifanelekileyo seholide eSouth Limburg, ngelixa usonwabela bonke ubutofotofo basekhaya.
Ungasoloko ufikelela kum ngeMessenger/WhatsApp.